Waxaan ahay Nabad !!! WQ: Maxamed Faarax Duurgal | gobolada.com
Waxaan ahay Nabad !!! WQ: Maxamed Faarax Duurgal
Argagaxa, naxdinta, kufsiga, dilka iyo boobka ka jira waddanka macaluusha, iyo dhimashada ka imaanaysa qoriga afkiisa waa wax aniga la igu canaadayo.
Xamar mar hore ayaan ka qaxay. Way jirtay inaan dhowr jeer soo noqnoqday bal in la I dareemay oo dadka ay I tabeen, balse waxaan arkay in la ii sameeyey ururo badan oo iga ciribtira waddanka, kuwaasoo ah kuwo hubeysan oo cawo iyo maalin baadi goob ugu jira aragtideyda.
Rajo yar markay I soo gasho waxaa la igu sii dheereeyaa gumaad ka dhan ah xuquuqul insaanka, afduubka loo geysanayo dadka misaakiinta ah iyo dhaca intuba waa mudaaharaad aniga la igu sii fogeynayo.
Igama atkaateen colaadoo aan ogahay iney tahay cadowga koowaad haddaysan iiga hiilinin inta badan shacabka soomaaliyeed oo iyada iga raacay.
Dhalinyarada oo la ogyahay iney yihiin xoogga horumarka ee bulshada ayaa si toos ah u raacay colaadda oo badankoodii hubka qaatay, kuwaasoo qarxiya xabadda baaruudda oo aanan joogi Karin meesha ay ka soo urto.
Ciilka iyo murugada uurku taalada leh ee igu habsaday ayaa igu wacan inaan habeen iyo maalin latiico fakar taasoo noqotay mid caloosheyda si arxandaro ah u gubta.
Guuldarada iyo jabka igu dhacay waxaa sabab u ah inaan waayay aqoonyahanadii waxgaradkii iyo culimadii I buunbuunin lahaa si ay u suurowdo wacyo gelin ii horseeda in aan helo taageero, guuldaraas igu habsatayna waxaa qeyb ku lahaa saxaafadda oo aad u buunbuunisa calaadda, iyagoo mar walba sheega kooxo dablay ah oo dad dilay, dhaawacyo afduubyo la gesytay iwm. Xitaa dablayda ayaa si ay colaadda u sii wadaan heybtooda la qariyaa.
Marnaba la igama sheego idaacadaha wargeysyada iyo webside-yada dhowr jeer oo aan damcay inaan bixiyo wareysi si aan dadka wanaageyga u famasiiyo cid iga qaadda ayaan waayay, marar badan oo aan qabtay shir jiraa’idna ma aysan ka soo qeybgalin suxifiyiinta aan ku martiqaaday, waxayna taasi sababtay inaan la hadlo dad yar oo I raacsanaa, kalmadahaygiina ma ahayn kuwo dhaafay goobtii aan taagnaa ama gaaray dadkii aan ugu talo galay.
Waxaan la yaabanahay sababta uu dadku shakiga ugu jiro inaan ahay “NABAD” iyo inaan sabata u ah barwaaqada, horumarka jacaylka waxbarashada iyo wax walba oo wanaag ah.
Dadku miyeysan ogeyn inaan ahay midda keenta farxadda, raaxada iyo damaashaadyada? Ma shaki baa uga jira inaan ahay midda leh astaanta calaamka loogu jecel yahay ee CADDANKA ah….? Waa leygu duceystaa “NABAD iyo CAANO” haddana wax tixgelin ah bulshada kuma dhex lihi oo maba oga inaan ahay salka nolosha.
Waxaa layga doortay xumaatada ayadoo ley xaqirayo…. Calool xumada oo iga badatay ayaan marmar ciil dartii la ooyaa, waxaase si axmaqnimo ah dacaayad iigu haya kuwa u adeegga colaadda oo igu sheega inaan dalka uga qaxay fuleynimo… Maya…. Maya
Xaashaa lilaa, ma aqaano cabsi…. Waxaan ahay NABAD, caqligeyga ayaase I tusay inaan ka tago meesha leygu gumaadayo ee lagu haligayo nafteyda. wallaahi sidaasi ma aha, waa la I xaqiray oo waa la iga hiiliyey, dhinac ayaan la iga maray, taas weeye sababta ilmada ka keentay labadeyda indhood, dalkana aan ugu qaxay.
Si kastaba ha ahaatee waxaan ka warqabaa in cadowgeygii uu helay taageero kale oo dowlado shisheeye gacan uga helayaan, kuwaasoo hub lacag la’aan ah kaalmo u bixiya, waan arkaa in la ii heshiiyey, heshiiskaasise waa hoogeyga iyo baaba’ayga.
Caligu wuxuu ii sheegayaa in dunidani tahay mid la iigu heshiiyey oo inta jecel dhibkeyga ay is raacday…. Waxaana lala dagaalay aratideyda iyo in aan dib u soo muuqdo.
Waxay dantu igu qasabtay inaan u boqdo jiinka waxaana meelahaasi igu soo dhoweeyay dadka tabcatada ah iyo kuwa hadda soo fahmaya faa’iida aan leeyahay, oo qudhooda iga maarmi waayay, waxayna mudul weyn iigu dhiseen meel har qabow leh oo wabiga jiinkiisa ah, oo aan ku helay nolol macaan oo argagaxa ka fog… Waxaanse mar walba ku duceystaa in kuwo aan weli wagaageyga fahmin ay mar un ii baaqaan si aan meel walba si xor ah ugu noolaado.
Waxaa Qoray: Maxamed Faarax Duurgal